Sucuudiga & Imaaraadka oo lagu tuhmayo inay agabka lagu baaro caabuqa corona si qarsoodi ah u siinayaan Israel (Hay’ad aanad filayn oo soo daabulaysa) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Sucuudiga & Imaaraadka oo lagu tuhmayo inay agabka lagu baaro caabuqa corona...
Sucuudiga & Imaaraadka oo lagu tuhmayo inay agabka lagu baaro caabuqa corona si qarsoodi ah u siinayaan Israel (Hay’ad aanad filayn oo soo daabulaysa)
(Tel Aviv) 20 Maarso 2020 – Waxaa dalka Israel ka taagan shaki ka dhashay halka ay Hay’adda Sirdoonka Qaranka ee MOSSAD ka keentay 100,000 oo ah agabka lagu tijaabiyo cudurka coronavirus.
Agabkan ayuu nin la shaqeeya Wasaaradda Caafimaadka Israel, Itamar Grotto, sheegay inaysan wax badan ka qaban doonin qalabkan oo ku yar dalkaasi, sida ku dhigan Times of Israel.
“Mossad waxay keentay wixii la waydiistey. Hilinkan qarsoodiga ihina waa noo furnaan doonaa si aan u keensanno wixii loo baahdo,” ayuu yiri sarkaal sare oo ka tirsan Mossad oo is qariyey.
Yeelkeede, waxaa la isku haystaa halka uu agabkani ka yimid: Saxaafadda maxalliga ah ayaa sheegtay in Mossad ay agabkan ka heshay dal ku yaalla Khaliijka oo aysan magaciisa shaacin.
Dalkaas ayay ku sheegeen mid ay la leeyihiin iskaashi heer hoose ah oo dhanka amaanka ah, gaar ahaan mid ku fooggan dalka Iiraan.
Xafiiska RW Yuhuudda, Benjamin Netanyahu, ayaa isaga oo aan faahfaahin ku gaabsaday inay “Mossad iyo hay’aad kale” keeneen agab “loo baahnaa aadna muhim u ahaa” si loogula tacaalo xasaradda coronavirus.
Dadka arrimahan u dhuun daloola ayaa farta ku godaya dalal ay ka mid yihiin Sucuudiga iyo Imaaraadka oo ay Israel ka dhaadhicisay inay maagaan Iiraan oo ay is hayaan Israel, si ay howl istaraatiji ah si bilaash ah ugu qabtaan.
Waxaa jira dalal badan oo Muslim ah oo uu cudurkani halis ku hayo, balse aan wax kaalmo ah ka helin Khaliijka.
Previous articleLABA arrimood oo oo midkoodba gaar ula gudboon DF Somalia & maamulka Somaliland
Next articleDF Somalia oo hal arrin wax ka qaban la’ & laba TALO oo loo soo jeediyey + Sawirro